ငါသူမကိုမပါဘဲပျောက်ဆုံးသွား | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 14, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
သူမ၏ချောမွေ့သောအသားအရေ၊ တောက်ပသောမျက်လုံးများ၊ နူးညံ့သောအသံ။ သေချာတာပေါ့၊ တခါတလေသူမသည်နံနက်အချိန်တွင်ထ။ မထနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုပေါက်ကွဲသံကြီးဖြင့်ရိုက်ခတ်ခဲ့သည် လေအေး... ဒါပေမယ့်သူမအပေါ်ခဲ့သည့်အခါသူမအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ငါသူမကိုလွှတ်လိုက်ရတယ် သူမကဆရာဝန်နဲ့ပြတ်သွားတယ် သူတို့ကရိုးရှင်းတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးသူမကိုငါ့လက်မောင်းထဲပြန်ထည့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါသူမကိုမပါဘဲရှုံးသည် မကြာမီပြန်လာ MacBookPro!
ကျွန်တော့်စာဖတ်သူတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုစိတ်ရှည်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အပူချိန်၊ သက်ပြင်းချ
ဇွန် 14, 2007 မှာ 11: 23 pm တွင်
ကြားရတာ တောင်းပန်ပါတယ်!! =(
HP လား? အိုး…
ဇွန်လ 15 ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ 23 မိနစ်
ဟေး Doug၊ နောက်ထပ် ပို့စ်အနည်းငယ်အတွက် နိမိတ်ဖတ်ပုံကို သင်ဆက်ထိန်းထားပြီး သင်နှစ်ယောက်ကြားတွင် တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဟု အမှန်တကယ် ထင်မြင်လာမိသည်။ ဆိုလိုတာက တကယ့်သဘော 🙂
ဇွန်လ 15 ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 16 မိနစ်
ဟား! ငါမင်းကိုပြောရမယ် AL... အဲဒါက ငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့လက်တော့ပ်တွေပတ်ပတ်လည်မှာ ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တာ အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျွန်ုပ်တွင် အရာအားလုံးနီးပါးကို ပိုက်ကွန်သို့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း မိတ္တူကူးထားသော်လည်း အဆင်ပြေပုံမပေါ်ပါ။